Na nahazo rariny amin’ny fitsarana aza : tsy avela ho etsy Mahamasina mihitsy ny Tim | NewsMada
Na nahazo rariny amin’ny fitsarana aza : tsy avela ho etsy Mahamasina mihitsy ny Tim
Par Taratra sur 08/07/2017
Nandresy teny anivon’ny tribonaly misahana ny ady amin’ny fanjakana ny Tim ka nivoahan’ny didy fa miato ny ny fepetra noraisin’ny prefektiora nandrara azy ireo tsy ho eny Mahamasina. Etsy andaniny anefa, namoaka fanapahan-kevitra hafa indray koa ny prefet fa voarara ny hetsika ato anatin’ny telo andro.
Nitady ny fomba rehetra hatramin’ny farany ny fanjakana. Nampiakatra ny raharaha teny anivon’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ny Tim, manoloana ny fanakanana azy ireo tsy hanao hetsika etsy Mahamasina, anio. Nivaly, omaly avy hatrany, izany ary nanome rariny azy ireo fa miato ny fanapahan-kevitry ny prefektiora nandrara ny hanaovana ny fankalazana ny faha-15 taon’ny antoko eo amin’io kianjabe io.
Tsy niandry ela koa anefa ny eo anivon’ny prefektiora ka nandray fanapahan-kevitra hafa fa voarara avokoa ny hetsika rehetra eto Antananarivo Renivohitra sy ny distrika manodidina, nanomboka, omaly sy anio ary rahampitso.
Etsy andaniny, mbola mitana ny toromarika avy amin’ny prefektiora ny eo anivon’ny Emmo/Reg amin’ny tsy fahazoana manao hetsika, mandritra ireo andro telo ireo. “Voarara ny fitangoronana amin’ny toerana tsy nahazoana alalana mba hialana amin’ny mpanararaotra sy ny mpandroba…”, hoy ny lehiben’ny Emmo/Reg, ny Kly Ravoavy Zafisambatra, omaly tetsy Ankadilalana.
Araka izany, nilaza ny tsy hihemotra ny eo anivon’ny Tim, niainga amin’ilay didim-pitsarana manome rariny azy ireo ka ahafahany mampiasa ny kianjaben’i Mahamasina. Voalaza rahateo fa efa tonga avokoa ireo avy any amin’ny faritra, ankoatra ireo mbola eny an-dalana sy ny efa eto Antananarivo sy ny manodidina.
Hanasa ireo mpitarika politika ny Tim
Etsy andaniny, namoaka fanambarana ny eo anivon’ny kaominina fa ho tapaka ny lalana etsy Mahamasina sy ny manodidina sy ny etsy Anosy. Hisy rahateo ny hetsika fanamarihana hiarahan’ny mpitarika ny Tim amin’ireo antoko politika hafa sy nanasana ireo masoivoho vahiny samihafa eto amintsika ao amin’ny Carlton Anosy, anio maraina.
Ny tranga tahaka izao koa anefa, manome endrika ratsy ho an’ny fanjakana, na eto an-toerana na eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, manoloana ireo tompomenakely naka izao fanapahan-kevitra hanakanana ny fahalalahana maneho hevitra izao. Tsy ahitana taratra ny tena demokrasia, zary resabe fotsiny !
Manoloana ireo rehetra ireo, andrasana ny hitranga etsy Mahamasina, anio. Samy hotsarain’ny tantara avokoa ny rehetra ary tompon’andraikitra amin’ny fanapahan-keviny.
Une réponse à "Na nahazo rariny amin’ny fitsarana aza : tsy avela ho etsy Mahamasina mihitsy ny Tim"
GRENIER ROGER (Jr syr fcb) 09/07/2017 à 10:51
rEHEFA NY TRIBUNAL ADMINISTRATIF NO MANOME RARIRINY IZAY MANANA NY legitimite DIA NY VAHOAKA NO MANANA NY mARINA KA AZY TENY FARANY;;; KOA DIA HITA EO RAHA HO TONGA SAINA I RAMALAGASY